…Noma kukhona "overachievers" yanamuhla ubhidliza ubudlelwano babo?
"Usufike ibanga elide, baby,"Uthi a commercial ethandwa okudumisa ukuziphendukela owesifazane wanamuhla. Futhi ngempela siye kufika!
Abesifazane wagogobala kusukela nkathi lapho sasingakwazi ngisho amavoti, to powerhouses ezombusazwe ukuba alubhekisise.
Ngisho enkundleni corporate, abaningi bethu baye wenyukela isitebhisi ezinkampani nobuholi izindima, ekuphatheni amabhajethi massive umnyango futhi abangaphansi ukuthi ngokuvamile amadoda.
Engeza lokhu iqiniso ukuthi esikhathini esiningi sihlala ungumnikazi emakhaya ethu, imali yethu siqu, futhi babe imibono yethu. Futhi amazwi singing group, Destiny sika Child, "I ancike kimi, uma ngifuna. "
Bravo Two! Goba.
Kodwa, nanku ukuhweba off…
Owesifazane yimpumelelo Namuhla ingase ibe ngokuwina ibhizinisi ngesikhathi yokulahlekelwa love.
Futhi lapha Yingakho.
Far too abaningi kithi ahluleke ukuqaphela ukuthi eziningi izimfanelo ukuthi sikwazi ukulawula eboardroom, kungabangela detriment ekamelweni. Sawubona?!
In the battle of the abesilisa nabesifazane, sisuke ngokuwina impi kodwa ukulahlekelwa impi?
Noma, in the amazwi Dr. Phil, "Manje kanjani ukuthi workin’ okwe '?"
Nazi zimo ezine ezivamile ezibonisa indlela ngezinye izikhathi emasculate amadoda ethu enganakile.
Mhlawumbe nawe unecala ambalwa. Funda futhi ukuthola.
THE "IT'S INDLELA MY NOMA HIGHWAY" sengqondo— Sure, nezikhundla ezinikeza abanye igunya emhlabeni emsebenzini asivumele ukutshela izifiso zethu kulabo siqasha yokukhokhela amasevisi abo. Kodwa, ubudlelwano siqu zihlukile. Yibona okufanele kube ubudlelwano lapho bobabili amaqembu’ idinga nemizwa indawo, hhayi izindima of umzali noma wokutakula.
ASEZANDLENI Obsession—UNkulunkulu akubusise ingane ukuthi ngayithola siqu sakhe. Futhi abanye bethu singelokothe ​​sehluleke ukuvumela esishade nabo bayazi ukuthi yizinto zethu ezibonakalayo yizona byproducts impumelelo yethu futhi ephathiswe kuphela kithi, ikakhulukazi uma kuphakama ingxabano. "Indlu yami, imoto yami, imali yami. "Izwi lami!
"I AM WOMAN Yizwani ME Roar "SYNDROME—From kokuba ikhono lokwenza imali yethu siqu futhi ahlinzekele kahle yethu siqu nenhlalakahle, to wenzalo zokutholwa ongakhetha ukuthi can X amadoda ngaphandle kokufaka ezothando nsuku zonke zokuphila, abanye bethu unikeza umyalezo wokuthi amadoda kukhona dispensable in amazwi nezenzo zethu.
BATHATHA zezitsha BIG ezintweni ezincane—Ophaka izimpi ngamazwi kunikeza abanye besifazane umuzwa amandla kanye nokubaluleka, lapho ephuma amadoda abavukelayo ukumelana noshintsho.
Strong akukubi ngaso sonke isikhathi.
Kodwa balance ngokuvamile kungcono.
Ingabe abesifazane babe konke?
Sure, kodwa uzinqumele yothile’ akhokhe ithebhu— okubizela a Sinike kancane futhi bathathe amakhono afanayo yezingxoxo odade savvy baqashe kusuka 9 to 5. Phela, njengoba Billy Dee William utshela Diana Ross in the movie Mahogany, "Impumelelo ngaphandle umuntu ukulitshela lisho Nothin '!"
Kukhona ezinye imizi US lapho amadoda single bazizwa bekhululeke kakhudlwana kunabanye. Lokhu ingxoxo mayelana amagama amahlanu ...